...Aqriso: Taariikh nololeedka madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud
Monday May 16, 2022 - 01:06:29 in Wararka by Mogadishu Times
Waxaa caawa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud oo horay u soo noqday Madaxweynihii 8-aad ee Soomaaliya, intii u dhaxeysay sanadihii 2012—2017-kii.
Xasan Sheekh oo ku guuleystay in dowladii uu hoggaaminayey ay rasmi noqoto oo ka baxdo KMG, burburkii kadib, wuxuu caawa noqday Madaxeynaha 10-aad ee Soomaaliya, waxaana qormadaan idinkugu soo gubnineynaa taariikh nololeedkiisa.
Taariikh nololeedka Xasan Sheekh Maxamuud
Xasan Sheikh Maxamuud waa hoggaamiye iyo Madaxweynihii siddeedaad (8) ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya intii u dhaxeysay 2012—2017. Burburkii 1991 ee kaddib Madaxweynihii kowaad ee loo doorto in uu hoggaamiyo Xukuumad aan kumeel gaar ahayn ayuu noqday.
Ku dhashay 1955 degmada Jalalaqsi ee bartamaha gobolka Hiiraan. Haldoor u dhaqdhaqaaqa dhab u heshiisiinta, bulshada rayidka iyo u ololeeye waxbarashada iyo barbaarinta ubadka ayuu ahaa muddo dheer. Kaddib bud— dhige iyo maamulaha Mac’hadka SIMAD oo markii dambe Jaamacad isu badelay ayuu noqday. 2012 ayaa loo doortay Madaxweyanaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. 2013 ayaa Jariiradda TIME u aqoonsan tahay boqolka qof ee dunida ugu saameynta badan ee raadka reebtay.
Xasan Sheikh Maxamuud, shahaadadii koowad 1981 ayuu ka qaatay Jaamacadda Ummadda ka asagoo ku takhakhusay Culuumta Farsamada Gacanta. Shahaadada labaad ee Maamulka iyo Maareynta Farsamada Gacanta 1988 Jaamacadda Barkatullah ee horey loo yaqiinay Jaamacadda Bhopal. 2015 ayaa Barkatullah guddoonsiisay darajada ugu dambeysa (Doctor of Literature) ayada loo aqoonsaday dadaalkiisii dheeraa ee waxbarashada ubadka Soomaaliyeed. Sidoo kale Maxamuud, Jaamacadda Eastern Mennonite Mac’hadkeeda Nabadda ee Virginia ayuu ka qallin jabiyey arrimaha dhexdhexaadinta, tiiraanyo—bixinta iyo dhismaha xaruumaha nabadda iyo waxbarashada.
Macalin iyo tabobarre ayuu ka noqday Dugsiga Sare ee Tababarka Farsamada Gacanta Lafoole, kaddib wuxuu u dalacay Maamulaha Mac’hadka Tabararka Macalimiinta ee Jaamacadda Ummadda.
Burburki Dowladda iyo dagaalada sokeeye dadka faro ku—tiriska ah ee dalka ku nagaaday ayuu noqday. Wuxuu isutaagay xal u helidda dhab—u—heshiisiinta, xal u helidda dagaalada sokeeye iyo dib—u—howlgellinta xaruumihii waxbarashada ee burburay. Wuxuu la shaqeeye hey’adaha Qaramada Midoobay ee UNDP iyo UNICEF. Sidoo kale Jaamacadda Oxford Xaruunteeda Daraasaadka Qaxootiga iyo mashruucyo kale ee horumarinta nabadda iyo dib u dhiska.
Dagaalkii sokeeye markuu qarxay 1991 UNICEF ayuu u noqday Sargaal Waxbarashada kala shaqeeya iyo sidii dib loogu furi lahaa dugsiyadii waxbarashada. Wuxuu UNICEF la shaqeynayey bilowgii 1993 ilaa 1995.
Howlgalkii UNOSOM markii ay dalka ka baxeen, Maxamuud wuxuu qeyb ka noqday shirarkii siyaasadeed ee xalka iyo nabadda Soomaaliya loogu raadinayey. Wuxuu wax ka asaasay bulsho rayid ah oo qeyb ka noqota xal waara u raadinta dalka si la iskugu soo dhaweeyo dagaal oogayaashii dalka iyo caasimadda Muqdishu maamulayey. Ururadii bulshada rayidka ee Maxamuud, wax ka asaasay weli qeybo ayaa shaqeeya.
Heshiiskii Qaahira ee 1997 xubnihii ku guuleystay in ay gorgortan ku qaadaan ‘‘khadkii cagaarnaa’’ ee kala qeybinayey Waqooyiga iyo Koonfurta Muqdishu ayuu noqday. Qaadidda ‘‘khadka cagaaran’’ ayaa aheyd isbaaro weyn oo nolosha iyo isu—socodka bulshada hortiilay.
Dagaalkii sokeeye markuu dabo dheeraaday waxaa la garowsaday si nabad iyo xasilooni waarta logu gaari karo in lehelo khuburo dhexe oo maamulka iyo maareynta bulshada qeyb ka noqota. Ayadaoo taas laga duulayo ayuu 1999 Maxamuud wax ka aasaaso Mac’hadda Maamulka iyo Maareynta Horumarinta (SIMAD) oo markii dambe Jaamacad weyn oo hadda saddex iyo labaatan(23) sano jirsatay noqday. Maxamuud ilaa 2010 wuxuu ahaa maamulaha Jaamacadda SIMAD.
2001 ayuu Maxamuud, ku biiray Xarunta Cilmi Baarista iyo Wadatashiga Soomaliyeed (CRD) asagoo Cilmi Baare Sare oo Nabadda iyo dib—u—dhiska ka noqday. Safaro is dabo joog ah oo boogodhayid, dhab u heshiisiin iyo xog aruurin ah ayuu gobolada dalka ku bixiyey. Wuxuu noqday xubin bud—dhig iyo hormuud u noqday sida loo adkeyn karo bulsho rayid ah oo bishiiba mar isugu timaadda xal u helidda mashaqooyinka dalka la degay.
2008 ayuu loo magacaabay in uu hoggaamiyo Sharikadda Telecom oo markaa aheyd Sharikadda Isgaarsiinta labaad ee dalka ugu weyn. Sidoo kale sharikado kale oo Geeska Afrika ka hirgalay oo gaar loo leeyahay ayuu wax aasaasay.
2011 ayuu Maxamuud siyaasadda u xuubsiibtay. Wuxuu dhisay Xisbiga Nabadda iyo Horumarinta. Xubnaha Xisbiga ayaa u doortay April 2011 in hoggaamiyo Xisbiga saddexda (3) sano ee ugu horreysa. Bishii August 2012, ayaa loo doortay Xildhibaan Golaha Shacabka ka tirsan ee Baarlamaankii sagaalaad (9) ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
September 10, 2012 ayaa Xildhibaanada Soomaaliyeed u doorteen Madaxweynihii siddeedaad (8) ee dalka. Si weyn ayaa Soomaalida iyo caalamku usoo dhaweeyeen doorashadiisa. Ergeygii gaarka ahaa Qamada Midoobay Augustine Mahiga, ayaa ku sifeeyey doorashada, ‘’doorashadii Maxamuud, tallaabo weyn oo dhanka nabadda iyo horumarinta Soomaaliya loo qaadey waaye. In Maxamuud gudaha dalka lagu doorto waxay fariin weyn u direysaa Afrika iyo caalamka in aan horumarinta Soomaaliya marna laga quusan.’’ Dowladda Mareykan ayaa ugu hambalyeysay shacabka Soomaaliyeed doorashada Xasan oo fariintaan u soo gudbisay, ‘‘waa geedi kale oo shacabka Soomaaliyeed ugu guureen dhanka nabadda, dib u dhiska iyo dowlad wakiil rasmiya u ah shacabka Soomaaliyeed.’’
Doorashadii Xasan caalamka ayaa kalsooni buuxda siiyey Dowladda Soomaaliya oo si rasmiyana u aqoonsaday markii ugu horreysay burburkii 1991 kaddib. Aqoonsiga iyo kalsoonida caalamku siiyey ayaa keentay in Dowladda iyo Shacabka Soomaaliyeed lagu taageero adduun dhaqaale oo ka badan labo (2) bilyan oo dollar oo lagu dhisayo siyaasaddii lixda (6) tiir ee Xasan usoo bandhigay shacabka Soomaaliyeed si nabadda, dimuqraadiyad iyo horumarinta dalka horutebinta loo siiyo.
Doorashada Xasan waxaa Soomaaliya horyiilay mushkilado waa weyn. Xukuumadda aan dakhlin soo xareyn karin oo awood dakhlin aruurin lahayn oo laga sugayo is badel gun iyo baac dheer leh iyo la dagaalanka argagixisada nabadda iyo midnimada dadka diidan ayuu la wareegay. Mushkilladaha dakhli iyo awood yaridda dhaqaalaha waxaa u dheeraa dhismaha kalsoonida shacabku ku qabaan dowlad shaqeysa oo adeeg gaarsiin karta. Xukuumadda ayaa isku garab wadey kalsooni dhiska, la dagaalanka argagixisa dalka laga xorreynayo iyo abuuridda iyo kordhinta ilaha dhaqaalaha.
Xasan ayaa ku suntanaa meelmarinta, dhismaha iyo bud—dhiggidda hey’ado awood iyo sharciyad u leh soo celinta kalsoonida, horumarinta iyo dhammeystirka xasilooni siyaasadeed oo taabagasha.
Madaxweyne Xasan ayaa suuro—geliyey in boqolkiiba siddeetan (80%) Al Shabaab laga xorreeyo dalka, in todobaatan iyo shan kun (75,000) oo ardey dugsiyada dib loogu celiyo, howlgelinta Ayraboorka iyo Dekadda oo markii ugu horreysay dhaqaale xoog leh oo lagu kabo miisaaniyadda dowladda, dib—u—dhiska waddooyinka iyo baahinta adeegyada dowladda.
Xasan wuxuu hormuud aan daalin u noqday dimuqraadiyeynta Soomaaliya, horutebin siinta dhismaha hey’daha sharciga ah, dhammeystirka iyo dib—u—eegista dastuurka, dhismaha dowlad gobolleedyo xubin ka ah Dowladda Federaalka iyo doorasho dadban oo dadka loogu dhaweynayo in ay soo doortaan wakiiladooda Golaha Shacabka iyo ugu dambeyn dhismaha Aqalka Sare oo markii ugu horreysay dalka laga hirgeliyey si loo dhammeystiro Federaalleynta dalka.
Maadaama Madaxweynuhu yahay Taliyaha Guud ee Xoogga Dalka (iyo ciidamada Qalabka sida) wuxuu ku guuleystay in dib—u—habeyn weyn lagu sameeyo isku dhafka, isla xisaabtanka iyo hufnaanta Hey’adaha Amniga si loo helo ciidan muunad qaran leh oo hanta amniga guud dalka. Waxaa dib u habeyn iyo qalabeyn lagu sameeyey Xoogga Dalka iyo Booliska si ay amniga u hantaan.
Labaatan (20) sano ka badan kaddib waxaa Xasan ku guuleystay in dib loo howl—geliyo koror dhaqaale iyo dhiirin gelinta ilaha dhaqaalaha ee gaarka loo leeyahay, ayada oo la dhammeystiray shuruucda iyo xeerarka maareynta iyo maamulka dhaqaalaha dalka. Dhiirigelinta iyo abuurka ilaha dhaqaale ayaa horseeday horumar baaxad weyn oo sanadkii soo kordhiyey koror dhaqaale oo saddex dhibic todobo (3.7%) ka badan. Waxaa kordhay oo saddex (3) jibaarmay ganacsiga gaarka loo leeyahay sida Bangiyada, xawaaladaha, sharikadaha isgaarsiinta iyo beecmushtariga dalka iyo dibadda isaga goosha sida dhoofinta xoolaha nool oo laf dhabar dhaqaale u ah bulshada Soomaaliyeed.
Xasan wuxuu horutebinta iyo muhiimadaha ugu horreeya siiyey dhismaha iyo kor u qaadidda awoodda Hey’adaha Hufnaanta Maaliyadda (PFM) ka shaqeeya sida Bangiga Dhexe, Hantidhowrka Guud, Xisaabiyaha Guud iyo Wasaaradda Maaliyadda si kalsoonida iyo taageerada Hey’adaha Dhaqaalaha Dunida loo helo.
Madaxweyne Xasan ayaa markii ugu horreysay bilaabay hirgelinta Barnaamijka Kormeerka Shaqaalaha Rayidka (Staff-Monitored Program (SMP) ee IMF ku kaalmeynaysay Soomaaliya si deyn cafintu u hirgasho. Barnaamijka Kormeerka Shaqaalaha ee IMF ayaa horseeday in salka u dhigno dib—u—yagleelidda Siyaasadda Maaliyada oo dalka u horseeday in lacagtii iyo awooddii dhaqaalaha ee dalka dib loo soo celiyo. Heshiiska IMF ayaa kaalmeeyey in si dhammeystiran u shaqeeyaan Hantidhowrka, Xisaabiyaha Guud, Baanka Dhexe iyo hey’adaha kale ee maaliyadda markii ugu horreysay burburka kaddib.
Halka la joogo
Bishii February 2017 wuxuu Maxamuud si rasmiya xukunka Madaxtooyada si nabad ah u wareejiyey Madaxweynihii xigay oo ku yimid doorasho si xor, xalaal iyo hufnaan leh ku dhacday oo cod bixinta dadka loo dhaweeyey kaddib doorashadii March 1969.
Xasan hadda waa murashax markale doonaya in uu dadkiisa u adeego si dadaallada dowlad dhiska, dhab—u— heshiisiinta iyo dhammeystirka Dastuurka loo hirgeliyo.
1978 – 1981 Bachelor of Technology Jaamacadda Ummadda, Mogadishu, Somalia.
1986 – 1988 Master of Technical Education Jaamacadda Bhopal, India
2015 – Doctor of Literature (honorary) Jaamacadda Barkatullah, India
Cilmi Qoraalleedyo muhiim ah
• The role of Somali CSOs in conflict and peace – a paper presented in Somali Social Forum Conference held in Mogadishu, 2003
• Building Structures for Peace: The Banaadir Administration – ACCORD Publication 2009
• Somalia’s Missing Millions: The Somali Diaspora and its Role in Development, March 2009 UNDP Somalia Publication
• A History of Mediation in Somalia Since 1988 – an International Peace Building Alliance (Interpeace) Publication 2009
• Somali Civil Society: Peace Building in a Collapsed State, 2008